माफी माग्दै हुम्लाका सहायक सिडिओले भने गल्ती बोले
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार १३:१७ September 25, 2020 Nonstop Khabar
काठमाडौँ । हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले ‘गल्ती बोलें, क्षमा चाहन्छु’ भन्दै गृह मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण दिएका छन् । चीनले नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेको भनी ‘विवादास्पद अभिव्यक्ति’ दिएका हमाललाई गृहले बुधबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । गृहको प्रशासन महाशाखामा बिहीबार दिउँसो स्पष्टीकरण पत्र पठाउँदै उनले स्थानीयले भनेको कुरामा विश्वास गर्दा आफूबाट गल्ती भएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख […]
पहिरोमा परी मृत्यु भएका एकैघरका ९ जनाको गरियो सामूहिक अन्त्येस्टी
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०८:३८ September 25, 2020 Nonstop Khabar
स्याङ्जा, ९ असोज । पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाएका नौ जनाको रामनदी धाम (राम्दी) मा बिहीबार साँझ सामूहिक दाहसंस्कार गरिएको छ । स्याङ्जा र पाल्पाको संगमस्थल रामनदीधामस्थित कालीगण्डकी नदीमा सामूहिक दाहसंस्कार गरिएको हो । नौ जनालाई आठ वटा छुट्टाछुट्टै चिता बनाइएको थियो । ६ महिनाको बालकलाई १९ वर्षीया आमा बिनिता नेपालीसँगै एउटै चितामा राखेर दाहसंस्कार गरिएको […]
काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य–४ (एसडिजि गोल–४)का लक्ष्य पुरा गर्न संविधानतः विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा नलगेसम्म एसडिजिका लक्ष्य पुरा नहुनेमा उनीहरुको जोड थियो । दिगो विकास लक्ष्य सप्ताहाका अवसरमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल(एनसिइ)ले आयोजना गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य ४ को राष्ट्रिय प्रारुप कार्यान्वयन कसरी […]
पहिरोमा परेर एकै पाँचजनाको मृत्यु, ४ वेपत्ता
८ आश्विन २०७७, बिहीबार १०:२८ September 25, 2020 Nonstop Khabar
स्याङ्जा, ८ असाेज ।घरका स्याङजामा पहिरो जाँदा एकै परिवारका ५ जनाको मृत्यु भएको छ । वालिङ नगरपालिका– १४ तमादीमा पहिराे गएकाे हाे । मृत्यु हुनेमा घरधनी माया नेपाली, दीपक नेपाली, सेनी नेपाली, जीवन नेपाली र उमा नेपाली छन् । उमा उक्त घरमा पाहुना बस्न गएकाे बताइएकाे छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता डीएसपी राजेन्द्र […]
६ आश्विन २०७७, मंगलवार २३:०९ September 24, 2020 Nonstop Khabar
काठमाडौं, ६ असोज । एअरपाेर्टबाट जवरजस्ती राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुर्याइएका डा. गाेविन्द केसी अन्तत: शिक्षण अस्पताल पुगेका छन् । ९ अाै दिनकाे अनसनमा रहेका डा. केसीले आफूलाइ शिक्षण अस्पतालमा नलगी कुनै पनि उपचार परिक्षण गर्न नदिने अडान लिएर बाहिरिएपछि उनलाइ अबेर ट्रमा सेन्टरबाट सारिएकाे हाे । मंगलबार अनशनकै क्रममा उनलाइ नेपालगञ्जबाट काठमाडौं ल्याइएकाे थियाे । […]
४ आश्विन २०७७, आईतवार २०:१८ September 22, 2020 Nonstop Khabar
काठमाडौं, ४ असोज । आइतबार नेपालमा १३२५ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का संक्रमित फेला परेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडाैं उपत्यकामा थपिएका छन् । उपत्यकामा पछिल्लाे २४ घन्टामा ७६७ जना संक्रमित थपिएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा भेटिएका ७६७ जना संक्रमित मध्ये काठमाडौंका ६०२, भक्तपुरका १०१ र ललितपुरका ६४ जना […]
४ आश्विन २०७७, आईतवार ११:०७ September 20, 2020 Nonstop Khabar
हुम्ला । हुम्लाको उत्तरी हिल्छा नाकालाई सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा खुला गर्नका लागि हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघ, हुम्लाले जिल्ला प्रशासन मार्फत माथिल्लो निकायमा ज्ञापनपत्र दिएको छ । मानिसहरूको आवतजावतमा रोक लगाए पनि सामान आयात निर्यातका लागि उचित मापदण्ड अपनाएर खोल्न माग गरेको छ । हुम्ला उद्योग बाणिज्य संघले हुम्लाका व्यावसायहरु धाराप पर्दै गएकोले उतरी हिल्सा […]